Xirfadaha jaamiciyiinta | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Haddii aad leedahay waxbarasho dalka dibediisa ah / Xirfadaha jaamiciyiinta
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 24 6 2019
Halkan waxaad ka akhrin kartaa dheeraad ku saabsan waxa shuruud u ah in la shaqeeyo qaar ka mid ah xirfadaha gudaha Iswiidhan. Haddii aad leedahay waxbarasho ajnabi ah dhanka mid ka mid ah xirfadahan waxaad akhrin kartaa dheeraad ku saabsan sida aad samaynayso si aad u awoodo inaad uga shaqayso kuwaasi.
Qiimaynta shahaadooyinka wabarasho ee dal kale
Qiimeynta shahaadooyinka ajnabiga ah waxaa sameeya Gudida Jaamicadaha sare iyo jaamicadaha (UHR). Haddii aad haysato waxbarasho ajnabi oo aad soo dhamaysay waxaad heli kartaa qiimeyn adigoo soo diraya codsi.
Akhri dheeraad ku saabsan Qiimeynta waxbarasho ajnabi ah kuna qoran boggan. Haddii aad haysato waxbarasho ajnabi ah.
Wabarasho dhammaystir ah
Qaar ka mid ah kooxaha xirfadaha waxaa jira waxbarashooyin dhamaystir ah lagana helo jaamicad sare iyo jaamicad ku taala Iswiidhan. Waxay xaq kuu siinayaan lacag waxbarasho waana 1–2 sano dhererkoodu. Waxaa jira waxbarashooyin loogu talogalay tusaale ahaan dhaqaale-yaqaanada, injineerada, kalkaalisooyinka caafimaadka, xirfadlayda arrimaha bulshada, xirfadlayda nidaamyada isgaarsiinta, dhakhtarada iyo macalimiinta.
Akhri dheeraad ku saabsan waxbarashooyinka dhamaystirka ah
Xirfadaha nidaamsan gudaha Iswiidhan
Gudaha Iswiidhan waxa ka jira noocyo xirfado nidaamsan. Tani waxay tahay in sharciga Iswiidhan ay ku qeexantahay waxa shuruud u ah si looga shaqeeyo xirfad. Waxaa tusaale ahaan shuruud u ahaan kara qalin-jebin ama ansaxin, aqoonsi ama aqonsi kale oo rasmi ah. Tusaale xirfadaha noocyadan ah waa dhakhtar iyo macalin.
Gudida Jaamicadaha sare iyo jaamicadaha (UHR) mas'uul kama aha qiimeynta waxbarashooyinka la xiriira xirfadaha nidaamsan ee gudaha Iswiidhan. Haddii aad doonaysid inaad ka shaqayso xirfad nidaamsan waa inaad la xiriirto hey'ada dawlaeed ee ku shaqo leh kana codsato xaqa inaad ku shaqayso xirfadan.
Akhri dheeraad ku saabsan xirfadaha nidaamsan
Akhri dheeraad ku saabsan qiimeynta xirfadaha dhanka daryeelka caafimaadka iyo bukaanka oo ku qoran bogga intarnatka ee Maamulka arimaha bulshada. Warbixintan waxaa lagu helayaa Iswiidhish, Ingiriisi iyo Carabi. Akhri wixi ku saabsan qiimeynta xirfadaha dhanka daryeelka caafimaadka iyo bukaaanka xayawaanka kuna qoran bogga intarnatk ee Hey'ada Beeraha. Warbixintan waxay ku qorantahay Iswiidhish. Akhri wixi ku saabsan qiimeynta aqoonsiga macalimiinta iyo macalimiinta fasalka barbaarinta kuna qoran bogga intarnatka ee Hey'ada Waxbarashada. Warbixintan waxay ku qorantahay Iswiidhish. Akhri dheeraad ku saabsan nooca xirfadaha nidaamsan kuna qoran bogga intarnatka ee Gudida jaamicadaha sare iyo jaamicadaha. Warbixintan waxay ku qorantahay Iswiidhish iyo Ingiriisi.
Marin dhakhso ah - jid dhakhso ah dhanka shaqada
Marinka dhakhsaha ah waxaa maanta laga helaa tiro xirfado iyo aagag ah kuna jiheysan adigaaga dalka ku cusub ee shaqo raadiska ah lehna xirfad dhanka xirfadaha shaqaaluhu ku yaryahay ee Iswiidhan.
Dhanka marinka dhakhsaha ah waxaa ku jira waxbarashada Iswiidhishka xirfada loogu talogalay, tababar goobta shaqo, qiimeyn, waxbarashooyin dhamaystir ah iyo qiimeynta aqoonta xirfadeed.
Akhri dheeraad ku saabsan marinka dhakhsaha ah kuna qoran bogga intarnatka ee Xafiiska Shaqada.
Dhaqaaleyaqaanno iyo maamulyaqaanno Injineerro, farsamoyaqaanno iyo aqoonyahanno kombiyuutar Macallimiin iyo barbaariyeyaal Xayawaanka iyo dabiicadda Xirfadaha daryeelka caafimaadka iyo jirrada Sharciyaqaanno Bulsho iyo habdhaqan-yaqaan